ဖိုင်တွေကပျောက် ဘယ်ကိုရောက် .... - MYSTERY ZILLION
ဖိုင်တွေကပျောက် ဘယ်ကိုရောက် ....
February 2008 edited October 2009 in Windows XP
သတိထားမိတာ နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်ရှိတော့မယ် ...
My Document ထဲ မှာ သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေ တစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး ......
အသစ်ရိုက်ပြီး သိမ်းတော့လဲ နောက်တစ်ခေါက် စက်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ မရှိပြန်ဘူး ....
ဒါနဲ့ နောက်ထပ် File အသစ် ထပ်လုပ်ပြီး သိမ်းတော့လည်း ပျောက်သွားပြန်တယ် ....
နောက်တစ်ခုသတိထားမိတာက Desktop ပေါ်က အသစ်လုပ်ထားတဲ့ Folder ပျောက်နေပြန်တယ် ....
virus လား .. ဘာလား ... ကူညီကြပါဦးဗျို့ ....
I want to know about it is standalone computer???
or it is running in the server environment???
တစ်လုံးတည်းသုံးတဲ့ standalone ကွန်ပျူတာပါဗျာ .....
MyDocument နဲ့ Desktop မှာ သိမ်းထားတာတွေကတော့ တကယ်ကို ပျောက်ပျောက်သွားတယ် ....
C Drive အောက်မှာ folder နဲ့ သိမ်းတာတော့ ပျောက်မသွားဘူး ...........
virus ဖြစ်နိုင်ချေ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ hidden file ဖြစ်သွားတာလား... hidden file ကို show လုပ်ပြီး run မှာ desktop လို့ရိုက်ပြီး desktop မှာ hidden ဖြစ်မဖြစ် ကြည့်လိုက်ပါလား.. desktop မှာကော တခြား file တွေ ပေါ်သေးလား... နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကတော့ desktop မှာ right click -> view ကနေ show desktop icon ကော လုပ်ထားလား.. သေချာအောင် ကြည့်လိုက်ပါလား
file hidden မဟုတ်ပါ ... ပျောက်ပျောက်သွားပါတယ် ....
ဒီလိုဖြစ်တာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ ...
Windows Error များလား .......
သုံးနေတာတော့ ပုံမှန်ပဲ .....
ဘာမှကို မဖြစ်ဘူး ..........
ကျွန်တော့်အထင် ဗိုင်းရပ်ပဲဖြစ်မယ်ဗျ ... Kaspersky နဲ့ စစ်ကြည့်ပါလား
Kaspersky update ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ် ....
1.Run Desktop Cleanup Wizard every (60) days(XP)
တစ်ချို့က Desktop ကို ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရအောင် လုပ်ထားတက်ပါတယ်...
2.(Registry Editor)Regedit ကို ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါလား၊
3.My Document ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ မသိမ်းပဲ ၊တခြား အမည်ပြောင်းပြီး files သိမ်းကြည့်ပါ..
ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ မှာ Desktop ပေါ်မှာ ဘာမှ မသိမ်းပဲထားတာကောင်းမယ်ထင်တယ်..
4.PC ပေါ်မှာ တခြား Cleanup programs တွေရှိနေပါသလား၊Group policy သတ်မှတ်ထားလို့လား၊
5.Windows ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါဘူး၊ Desktop Settings တွေကို ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ.
6.ဘာလိုမှမရရင် user account ကိုအသစ်ပြန်ဆောက်ကြည့်ပါ။
Kaspersky ကို update လုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မဖြစ်တော့ပါ ....
အဲဒီစက်ကို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် စမ်းသပ်လို့ရအောင် ဘာမှမလုပ်ပဲ ထားခဲ့ပါတယ် ....
Kaspersky update ထည့်လိုက်တော့မှပဲ အဆင်ပြေသွားတယ် ....
ဘာကြောင့်မှန်းတော့ အခုထိမသိ ........
virus ပဲ ဖြစ်မှာပါ ....................